umgca omncinci wokugaya irayisi,umzi mveliso ogqibeleleyo wokugaya irayisi
1.Ngokuzenzekelayo umgca wokugaya irayisi, ukusetyenziswa kwamandla kancinci
2.Ulungiselelo olupheleleyo lwezixhobo zokugaya irayisi lihambisanayo kwaye lunengqondo
3.Kulula ukusebenza kwaye ugcinwe, ukugcina indawo yokusebenzela
Iinkcukacha zeMveliso yomtya omncinci wokugaya irayisi
Umgca omncinci wokugaya irayisi sisixhobo esifanelekileyo sokucwangciswa kwerayisi ye-paddy.Oku kugqityiwe isityalo selayisi ingakwazi ukuqhubekeka kwi-paddy ibe yirayisi eqhelekileyo kazwelonke kwinkqubo enye. IPaddy ingena kumatshini kwinkqubo inokuvelisa irayisi esemgangathweni. Umgca wokugaya iilayisi unokuvelisa irayisi emhlophe 10-20 ton / day.Lomgca wokugaya irayisi uxhotywe ngesixhobo sokondla esizenzekelayo, ukucoca i-sieve, i-iron roller paddy husker, khumbula ukohlukana, isisosi esijikelezayo sedrafti kunye nerayisi e-brown eyahlulahlula,umatshini wokugaya irayisi,umatshini wokuqhekeza irayisi, isixhobo sombane sokulawula umbane.sixhobo esipheleleyo sokugaya irayisi sinokuxhoma ibrus crusher ekhethekileyo.Umthamo womatshini omnye nesityalo sinokwenziwa senziwe ngokweemfuno zabathengi.Lomgca wokugaya irayisi ngowona mmatshini ulungele ukuhambisa izixhobo,umzi mveliso omncinci wokulungisa irayisi, indawo yokuhambisa irayisi,indawo yeentaba, Iifama kunye nabo bazisebenzelayo. Ukusetyenziswa kwezixhobo zokugaya 3 Inqanaba lombane lesigaba samandla ombane.Iziphumo zalo mgca wokugaya irayisi encinci unokuba ngama-800 ~ 1000 kg / h.Lomgca wokugaya irayisi unembonakalo entle kunye nesakhiwo sediski.,ngomlinganiselo ophezulu welayisi, irayisi eyaphukileyo, Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kwaye kulula ukuqhubekeka.
Umgaqo womsebenzi omncinci wokugaya irayisi
Ezi ziinkozo ziluhlaza zifakwe kwimveliso yokutyela yeerayisi kwaye ke zithumela kumatshini weerayisi,ukucoca kunye nokuhlula ilitye ,ukungcola okusuka kwi-paddy irayisi.I-paddy irayisi iya kuthunyelwa kuyo irayisi husker emva kokucoca. Emva kokuba ishelfini, amabele, igobolondo kunye nerhasi zingena kwi-split split. Ingqolowa iyancanciswa yi-fan fan. Ilayisi kunye nomxube weerayisi ongashukumiyo uphakanyiswa kwi-paddy splitter nge-eleter yesibini ukuba yahlulwe. Kwinkqubo yokugaya irayisi, ifesti yoxinzelelo oluphezulu ifafazwa kwigumbi lokucoca ngokuqhubekekayo ngomngxunya womatshini werayisi, olunokunciphisa ubushushu belayisi, unimpling the bran, kwaye wenze irayisi ihambe kakuhle kwaye icoceke. Zintathu iintlobo zeempahla ezahlulweyo: irayisi emdaka ngebala iya kwilayisi yokuphela, irayisi egqityiweyo iphume kumngxunya wokuphelisa umgca wokuphela kwerayisi kunye nerhasi iwele kwigumbi lokusindisa eli .. Elinye icandelo libuyela emva kwisikhululo selayisi ngumphakamisi wokuqala. Phinda le nkqubo ingentla ukufezekisa injongo yokugaya irayisi emhlophe.Irayisi etyisiweyo iya kutyiwa ibe yirayisi yokufakelwa ibemhlophe kwaye ikhanye.Inyathelo elilandelayo lomgca wokugaya irayisi ofanelekileyo ngumbala welayisi ,kweli nqanaba,Kuza kukhethwa irayisi emnyama okanye ephuzi.emhlophe iya kugcinwa kwimigangatho yerayisi. Inqanaba lokugqibela lolu hlobo lokugaya irayisi luhlobo oluzenzekelayo kunye nomatshini wokupakisha.isetyenziswa ikakhulu kwilayisi emhlophe enesisindo kunye nokupakisha .mva kwayo kupakishwe. ,irayisi inokuthengiswa kwintengiso.
Iimpawu zezixhobo zokugaya zonke zerayisi
1.Lo mgca wokudityaniswa kwerayisi odityanisiweyo unokusetyenziselwa ukuqhubekeka zombini irayisi ye-paddy irayisi kunye ne-paddy irayisi emfutshane,irayisi e-paddy ejikelezayo. Isixhobo esipheleleyo sokugaya irayisi kufanelekile ukuba sivelise zombini irayisi emhlophe kunye nerayisi eneparoli, izinga lokuphuma okukhulu, inqanaba elaphukileyo eliphantsi.
2.Esi sixhobo esigcweleyo sokugaya irayisi sidityaniswa nezinyusi zebhakethi, isicoci eshukumayo, husker, isahlukanisi se paddy,umatshini wokugaya irayisi, irayisi grader,Esebenzisekayo kwaye iyathandeka.
3.Ngokuzenzekelayo umgca omncinci wokugaya irayisi, ukusetyenziswa kwamandla kancinci,ulungelelwaniso, umthamo omncinci, ukuphuma okuphezulu, Imveliso yerayisi eyaphukileyo, ubunyulu obuphezulu. Kulula ukusebenza, sinika imiyalelo yokusebenza kwinguqulelo yesiNgesi.
4.Singakwazi ukufaka umgca wokugaya irayisi ogcweleyo osekwe kwiqonga lomsebenzi wensimbi okanye ikhonkrithi egwetywe ngokweemfuno zabathengi,umatshini wombala weerayisi kunye nomatshini wokupakisha unokukhetha.
5.Isiqinisekiso somzimba esiyintloko 12 iinyanga ngaphandle kweendawo ezisetyenzisiweyo,Zonke izinto ezisetyenzisiweyo zenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu, yomelele kwaye inokuthenjwa.
6.Sinamava atyebileyo ekwakheni imigca yeerayisi epheleleyo kumazwe aphesheya ngempumelelo, kwaye safumana udumo oluphezulu kubathengi bethu ngomgangatho olungileyo, elona xabiso liphezulu kunye nenkxaso yobuchule & uqinisekisiwe ngenkonzo epheleleyo yobuchwephesha ngenkxaso yobuchule ngaphambi nasemva kokuthengisa.
Iinkcukacha zoomatshini besixhobo esincinci sombila
Umatshini wokuqokelela irayisi 1 iseti
Ilayisi husker 1 iseti
Ukwahlula ingqolowa kunye nomatshini wokudibanisa irayisi 1 iseti
Umatshini wedayisi wepayi 1 iseti
Umatshini wemibala yelayisi yelayisi 1 iseti
Umatshini wegrice grader 1 iseti
Ilayisi enesisindo kunye nomatshini wokupakisha 1 iseti
Isinyusi esiphindiweyo 1 iseti
Ilifti enye 5 iiseti
(umatshini wokucoca irayisi ,umatshini we-sorter wombala ,umatshini wokupakisha irayisi uyazikhethela)
Ipharamitha yobugcisa yomgca wokugaya irayisi omncinci
Iziphumo:800~ I-1000 kg / h
Ividiyo yeMigca emincinci yokuCoca iRice
Nxibelelana nathi Ngelayini encinci yokugaya irayisi